6 qof oo Soomaali ah oo xanuunka Coronavirus ku dilay Dalka Sweden - Worldnews.com
Dalka Sweden ayaa ka mid ah wadamada Europe ee Cudurka Covid-19 uu gaaray, warbaahinta gudaha Sweden ayaa xaqiijisay in 20kii sacadood ee la soo dhaafay ay xanuunkaan u geeriyoodeen dad
STOCKHOLM, Sweden – Aabe Soomaaliyeed ayaa gudaha waddanka Sweden ugu geeriyooday caabuqa Coronavirus, sidda ay BBC-da kasoo xigatay xubnaha qoyskiisa. Axmed Xaaji Xasan,...
Gareowe Online 2020-03-23
KHAAHIRA, Masar – Qof Soomaali ah ayaa dalka Masar ugu geeriyooday caabuqa Coronavirus, sidda ay maanta baahisay Warbaahinta Qaranka. Sidda ku xusan warbixinta, shaqsigaas...
Gareowe Online 2020-03-27
Somali-Swedes have criticized authorities for not doing enough to support the community during the coronavirus pandemic, national broadcaster SVT has reported. It comes as...
Gareowe Online 2020-03-28
DF oo fariin u dirtay Soomaalida ku nool dalal uu aafeeyay Covid-19
MUQDISHO, Soomaaliya – Tirada Soomaalida dalalka caalamka ugu dhimaneysa xanuunka Covid-19 ayaa aad u sareysa, sababta waxaa lagu macneeyay in aysan dheg-jalaq u siin...
Tiro Soomaali ah ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadkii ugu horreeyey ee cudurka Coronavirus ugu dhintay dalka Sweden, oo cudurkan uu kusoo ritay dad ka badan laba kun oo qof. ......
LONDON, UK – Iyaddoo dunida ay aad ugu dedaaleyso ciribtirka colka qarsoon ee Coronavirus, kaasoo dadka u laynaya si safmar ah hadii aysan muujin feejignaan dheeraad ah, Soomaalida ayaa waxay ku jiraan umadda uu aafeeyay. Qaaradda Yurub waa meesha uu dhimashada ugu badan ka geystay, taas waxay dhalisay su'aalo ka doodistooda ay waqti badan qaadaneyso. Dalalka kala ah; Sweden...
Soomaalida Sweden sida uu u saameeyay Xanuunka Coronavirus
Soomaalida Sweden sida uu u saameeyay Xanuunka Coronavirus Waxaa diiradda la saaray Soomaalida oo ay dadku u qaybsameen mid ku wiirsadey iyo mid ka walaacey, ka dib markii ay saxaafadda Sweden faafiyeen warar sheegaya inay Soomaalidu u badan tahay dhimashada fayraska corona. ”Ugu yaraan 6 ka mid ah 15 qof oo fayraska corona ugu dhimatay magaalada Stockholm ayaa Soomaali ah,”...
Norway: Soomaaligii ugu horeeyay oo u geeriyooday fayruska Corona
OSLO, Norway – Qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah ayaa caasimada Norway ee Oslo wuxuu ugu geeriyooday fayruska Corona, sidda uu baahiyey Telefishinka ku hadla afka Dowladda Federaalka ah. Sidda ay muujineyso warbixinta, Axmed Faarax Cali, oo 70-sano jir ahaa, ayaa cudurkaan uu soo ritay saddex maalmood kahor inta uusan dhiman oo ahayd habeenimadii Jimcadda. Geerida Cali ayaa...
ANKARA, Turkey – Konton qof oo ay ku jiraan Soomaali ayaa Talaadadii lagu xiray galbeedka Turkiga, sidda uu ku waramay Daily Sabax, oo intaas ku daray in dadkaas ay isugu jiraan muhaajiriin iyo qaxooti. Ciidamada Ilaaladaha Xeebaha ayaa lasoo wariyey ku qabteen degmada Dikili xili ay isku dayeyeen in ay doon ku galaan dalka Gariiga. Sidda ku xusan warbixinta, shaqsiyaadka...
Khayre oo go\_'aano iyo baaq cusub kasoo saarey Coronavirus
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa caawa ka hadlay dhibaatada Caabuqa Corona iyo cudurka ka dhasha ee loo yaqaan Covid19, saameynta uu dalkeenna ku yeelan karo, iyo sida looga gaashaaman karo. Ra’iisul Wasaaraha waxuu sheegay in cudurkaan uu qaar kamid ah dalalka caalamka ugu horumarsan dhaqaalaha, aqoonta, tiknoolajiyadda iyo adeegyada bulshada ee...